Bitootessa 08, 2021
Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa waliin kan wal irra ole, sadarkaa addunyaatti lakkoobsi dubartoota miseensa paarlaamaa ta’anii dabalaa deemus garuu sirna to’annaa dhiirotaa jala jiru hin hambifne.
Lisa Schlein Jeneevaa irraa akka gabaastetti jarmayaan sadarkaa addunyaa kan tokkummaa paarlaamaawwan biyyoolesssaa, miseensota opaarlaamaa addunyaa keessaa nuusaa ol kan ta’an dubartoota. Akka amma deemaa jirutti jedha jarmayaan kun qixxummaan saalaa utuu galma hin ga’in waggoota 50 ka biroo fudhachuu mala.
Biyyoonni hirmaannaan dubartootaa bara 2020 keessa ol aanaata’e Rwaandaa, Kuubaa fi Tokkummaa Emireetota Arabaa yoo ta’an, miseensota paarlaamaa dhibba irraa harka 50 ol qaabaachuun gabaasameera.
Muummicha barreesssaan dhaaba kanaa Martin Chungoong akka jedhanitti loogiin dubartoota irratti oofamu miseensa paarlaamaa akka hin taane isaan ittise. Yeroo tokko tokkos mootummoonni dubartoonni akka hin dorgomne ittisan jiru jedhan.
Gabaasi dhaabichaa akka mul’isutti kutaalee addunyaa mara keessatti fooyya’iinni argamee jira. Ameerikaan dubartoota miseensota paarlaamaa qaaachuu dhaan naannolee mara keessaa tokkoffaa irra kan jirtu yoo ta’u, dhibba irraa harki 32.4 dubartoota. Kana jechuun dubartoonni miseensota mana maree bakka bu’oota uummataa dhibbi irraa harki 27 kan ta’an dubartoota. Kunis seenaa biyyattii keessatti lakkoobsa ol aanaa dha.
Biyyoota uffee Sahaaraa gad jiran keessaa rakkoon nageenyaa hamaan jiraatu iyyuu Maalii fi Niger bakka bu’ummaa dubartootaan fooya’ina argamsiisanii jiraachuu gabaasaaleen ibsaniiru.
Biyyoonni kan akka Awrooppaa bakka bu’iinsa dubartootaa dhibba irraa harka 30 kan qaban yoo ta’u kanneen iddu galessa bahaa fi Afriikaa kaabaa boodatti hafuu dhaan dhibba irraa harka 17 qofaa qabu. Gama kanaan biyyi qabxii akaan gad aanaa qaban naannoo Asia-Pacific. Kunis yaaddoo guddaa ta’uu dhaabi gamtaa paarlaamaa biyyoolessaa beeksisee jira.
Dhiiraa Fi Durbii Wal Qixxee Ta'u Barsisuun Maatii Irraa Jalqabuu Qaba
Hoogganoonni KFO Lagannaa Nyaataa Dhaaban
Godaantonni Itiyoophiyaa Yemenitti Balaa Ibiddaatiin Du’an